University of Strathclyde - Isifundo ku: United Kingdom, Scotland
University of Strathclyde Yokuxhumana
isifinyezo : ultrasound
Wasekelwa : 1796
Ungakhohlwa xoxa University of Strathclyde
Bhalisa at University of Strathclyde
Strathclyde liyindawo enkulu ukutadisha futhi sijabulele ukuphila, ngesikhathi esifanayo. Futhi lokhu lapho ungathola konke ngathi – kusukela indlela esifundisa ngayo, walokho on eGlasgow futhi kanjani azungeze.
Inyuvesi yasungulwa ngo 1796 njengoba 'indawo bokufunda ewusizo’ futhi lokhu uhlala mission yethu namuhla: ukuhlanganisa umsebenzi oncomekayo academic nge ukuqondana ukuhlangana kwezenhlalo nezomnotho.
Njengoba 'indawo bokufunda ewusizo’ University uzibophezele ekuthuthukiseni umphakathi ngokusebenzisa ukuphishekela kobuhle ucwaningo, imfundo kanye ngolwazi, futhi ngokusebenzisa engagement zokudala nezinhlangano emazingeni asekhaya, Amazinga zikazwelonke nezamazwe ngamazwe.
Ukuze ube isikhungo olwehlukanisa, libhekene ehola ucwaningo nobuchwepheshe ukuma international futhi nge idumela elihle kakhulu yonkana ucwaningo, imfundo kanye ngolwazi.
Ukuhlinzeka eliphezulu, ugqozi imfundo nakho kubo bonke abafundi bethu futhi akhiqize ezivelele professional lebhizinisi iziqu umkhakha, ibhizinisi kanye nasemikhakheni.
Ukuze sibe zanamuhla umbono wethu, odala imibono emisha, ekudaleni amathuba fresh nokwenza imisebenzi ngokubambisana kanye nokubambisana amasu ezizuzisa umphakathi seNingizimu neAfrika.
Ukuze sikwazi futhi ukhuthaze bonke abasebenzi ukuthuthukisa amakghonwabo futhi nomthelela ekufinyeleleni mission yeNyuvesi.
Ukuze neqhaza ekuthuthukiseni kanye neqophelo lempilo yeDolobha lethu, isizwe kanye nomphakathi wamazwe ngamazwe.
Sizibophezele ekuhlinzekeni a imfundvo yelizinga lelisetulu kanye nesipiliyoni ukuze bonke abafundi, kungakhathaliseki isizinda sabo. Yeka ukuthi yesabeka kangakanani ukuba ukuthuthuka ngokusemandleni abo ngokugcwele, ikhiqiza abantu ezivelele professional lebhizinisi for embonini, ibhizinisi kanye nasemikhakheni.
umfundi isipiliyoni sethu sithi at inhliziyo konke esikwenzayo. Inyuvesi siwukwenza ukutshalwa kwezimali amasu ihlose asekela umgomo wethu ukuhlinzeka eliphezulu, imfundo ucwaningo-kwaholela futhi umfundi omuhle kakhulu experience.The University ihlose ukuhlinzeka abafundi bayo ngesifundiso omuhle futhi innovative, ukufunda ubuchwepheshe kanye izakhiwo. Sihlose ukuba bandise amathuba inkhulumomphendvulwano, futhi ahlinzeke abafundi ithuba ukuthonya isiqondiso sethu kwekuheha’ njengoba nathi sisebenza ndawonye ekufezeni umbono wethu wokuba i enyuvesi kwezobuchwepheshe international thina.
Thina bahlola izinhlelo zezemfundo abonisa isimo sengqondo esiqondile, indlela yokudala futhi innovative nokuthi isikhundla nathi iyahola yokufundisa nokufunda phakathi nakuzo zonke eyala. Inyuvesi Kuyakhuthaza abafundi bayo ukuba bafeze indima ebhekile engxoxweni mayelana isu wethu kanye nombono zekusasa.
Accounting & ezezimali
Chemical & inqubo ubunjiniyela
Civil & ubunjiniyela kwemvelo
Computer & Imininingwane wesayensi
Design, ekwakhekeni & ukuphathwa ubunjiniyela
Electronic & Ihluzo Elingafaki Ukuqoka
Umoya Wokungenisa Izihambi & ezokuvakasha
ukuthuthukisa ukuphathwa kwabasebenzi
mechanical & wobunjiniyela bezindiza
izakhiwo Naval, ocean & ubunjiniyela zasolwandle
Pharmacy & bezokwelapha sciences
Ukuvivinya umzimba kwezempilo
umsebenzi Komphakathi & inqubomgomo Komphakathi
Inkulumo & ukwelashwa ulimi
isu & inhlangano
Inyuvesi yasungulwa ngo 1796 ngentando John Anderson, Uprofesa of Philosophy Yemvelo e-University of Glasgowwho kwesokunxele imiyalelo futhi iningi ifa lakhe ukwakha inyuvesi wesibili e Glasgow okwakuyoholela ukugxila “Ukufunda Iwusizo” - onguchwepheshe izifundo ezisebenzayo - “ngokuba okuhle abantu kanye nekwentiwa ncono isayensi, endaweni yokufunda ewusizo”. Kamuva intshonalanga ye-University okuthiwa idolobha lakhona isikhungo campus ngemva kwakhe.
Ngo 1828, lesikhungo iqanjwe kabusha University Anderson, kancane ekufezeni umbono Anderson zokwakha amanyuvesi amabili emzini Glasgow. Igama lashintsha 1887, ukubonakalisa yokuthi kwakungekho igunya zomthetho ukuze ukusetshenziswa isihloko 'inyuvesi'. Ngenxa yalokho, Glasgow neNtshonalanga yeScotland Technical College kwamiswa, ekubeni Royal Technical College 1912, futhi e-Royal College of Science and Technology e 1956 bagxile esayense nobunjiniyela ukufundisa nokucwaninga. abafundi undergraduate bafanelekele lamadigri University of Glasgow noma Hlobanisa okulingana Royal College of Science and Technology (lwesikhathi).
Ngaphansi Uthishanhloko Samuweli Curran, physics enuzi omhlaba ihlonishwe (futhi umsunguli we counter scintillation), Royal College yazuza Isimo University, ethola Royal Charter yalo yaba I-University of Strathclyde e 1964, ihlangana ne-Scottish College of Commerce ngesikhathi esifanayo. Ngokuphambene nalokho okukholelwa yiningi, I-University of Strathclyde ayidalwanga ngenxa yalokho Robbins Umbiko we - isiqunto sokunikela isimo enyuvesi e-Royal College ayenziwe ngaphambili ngawo-1960 kodwa imisiwe ngenxa Robbins Umbiko we. I-University of Strathclyde kwaba enyuvesi yokuqala UK zobuchwepheshe sibonakalisa nomlando wayo, ukufundisa nokucwaninga ubuhle emfundweni zobuchwepheshe. Ngo 1993, University ifakwe Jordanhill College of Education.
Le nyuvesi isungule idumela layo futhi landa lisuka cishe 4,000 abafundi esigcwele e 1964 ukuze phezu 20,000 abafundi 2003, lapho kugujwa iminyaka engu-100 kwasungulwa i kubekwa itshe isisekelo sokuqala e-Royal College isakhiwo.
Ngo-July 2015, Wakhe soMkhulu Indlovukazi uvule Ezobuchwepheshe Nokusungula Centre (TIC), e-University of Strathclyde.
Uyafuna xoxa University of Strathclyde ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Strathclyde kumephu
Izithombe: University of Strathclyde Facebook ezisemthethweni
University of Strathclyde Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Strathclyde.